Safiirka Imaaraadka oo shaaciyey halka ay ku socotay Lacagta la qabtay
Safiirka Imaaraadka u fadhiga Soomaaliya Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya, Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi ayaa ka warbixiyay lacag shalay Ciidamada amaanka dowladda Federaalka ku qabteen Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Safiirka oo la hadlay VOA ayaa sheegay in lacagta dowladda ay qabatey aysan ahayn mid u socoty Safaaradda, balse ay ahayd mid loo waday Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, taasoo lagu bixiyo mushaaradka Ciidamada dalka.
Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi ayaa intaasi ku daray in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka warqabtey in lacagta ay usoo socoto Ciidamada Imaaraadka uu ku tababaray magaalada Muqdisho.
Dowladda Imaaraadka ayaa tababar siisay Ciidamo badan oo kuwa dowladda kamid ah iyo kuwa maamullada Puntland iyo Jubbaland oo ay sidoo kale bixiyaan bil kasta mushaarkooda.
Sarkaal katirsan Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay in Safiirka Imaaraadka uu ku sugnaa shalay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho si uu usoo qaado lacagta ay qabteen Ciidamada NISA.
Hadalka Safiirka ayaa yimid kadib war kasoo baxay Wasaaradda Amniga dowladda Federaalka oo ay ku sheegtay inuu socda baaritaan ku aadan halka ay ku socotay lacagta, dadka keenay iyo ujeedka laga lahaa in lagu fuliyo. Halkan ka akhri Warka.
Lacagta la qabtey oo ku jirta saddex Boorso ayaa cadadkeeda lagu sheegay $9.6 million [Sagaal Milyan iyo Lix Boqol oo Kun oo Doolarka Mareykanka] waxaana la dhigay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiriirka dowladda Federaalka iyo Imaaraadka uusan wanaagsanayn wiixii ka dambeeyay go'aanka Xukuumadda ay dhexdhexaadka uga noqotay Khilaafka Khaliijka.
Hay’adaha amniga Soomaaliya oo war kasoo saaray kulanka Gollaha Shacabka
Soomaliya 04.04.2018. 09:26
Gudoonka Baarlamaanka ayaa Khilaafkiisa gaarey meel khatar ah oo keeni karta in...
Farmaajo iyo Jawaari oo qabtey Shir Jaraa'id oo wadajir ah [DAAWO]
Soomaliya 10.04.2018. 15:18
Jawaari oo magacaabay Guddi waanwaan [Akhri magacyada]
Soomaliya 07.04.2018. 12:12
Xildhibaano kala ajande ah oo ku qul-qulaya Gollaha Shacabka Soomaaliya [Sawirro]
Soomaliya 04.04.2018. 08:29
Soomaaliya: Jawaari oo beeniyay War Culus oo laga faafiyay
War Saxaafaded 31.03.2018. 23:49